ICanada Ngoku Ivala Uhambo lokuya kumazwe aseMzantsi Afrika ngenxa ye-Omicron
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » ICanada Ngoku Ivala Uhambo lokuya kumazwe aseMzantsi Afrika ngenxa ye-Omicron
Ukusukela oko kwaqala ubhubhane, uRhulumente waseCanada ubeke amanyathelo kumda wethu ukunciphisa umngcipheko wokungenisa kunye nokuhanjiswa kwe-COVID-19 kunye nokwahluka kwayo eCanada ezinxulumene nokuhamba kwamanye amazwe. Namhlanje, uMphathiswa wezoThutho, oHloniphekileyo u-Omar Alghabra kunye noMphathiswa wezeMpilo, oHloniphekileyo uJean-Yves Duclos, babhengeze iindlela ezintsha zokukhusela impilo kunye nokhuseleko lwabantu baseCanada.
Njengenyathelo lokhuseleko, kude kube ngumhla wama-31 kuJanuwari, 2022, uRhulumente waseKhanada uphumeza imida eyongeziweyo kubo bonke abakhenkethi abebekummandla oseMazantsi eAfrika—kuquka uMzantsi Afrika, i-Eswatini, iLesotho, iBotswana, iZimbabwe, iMozambique, neNamibia— ngaphakathi. kwiintsuku ezili-14 zokugqibela ngaphambi kokufika eCanada.
Abemi bamazwe angaphandle abakhe bahamba nakweliphi na lala mazwe kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo abayi kuvunyelwa ukuba bangene eKhanada.
Abemi baseKhanada, abahlali abasisigxina kunye nabantu abanesimo phantsi koMthetho waseIndiya, nokuba sithini na imeko yabo yokugonywa okanye babenembali yangaphambili yovavanyo lwe-COVID-19, abebekula mazwe kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo baya kuxhomekeka kuvavanyo olongezelelweyo. , ukuhlolwa, kunye namanyathelo okuvalelwa yedwa.
Aba bantu kuya kufuneka bafumane, kwiiyure ezingama-72 zokumka, uvavanyo olusebenzayo lwe-COVID-19 lwemolekyuli kwilizwe lesithathu ngaphambi kokuba baqhubeke nohambo lwabo oluya eCanada. Ukufika kwabo eCanada, nokuba sithini na imeko yabo yokugonywa okanye babenembali yangaphambili yokuvavanywa bene-COVID-19, baya kuxhomekeka kuvavanyo lokufika kwangoko. Bonke abahambi baya kucelwa ukuba bagqibe uvavanyo ngomhla we-8 emva kokufika kwaye bavalelwe yedwa kangangeentsuku ezili-14.
Bonke abahambi baya kuthunyelwa kumagosa e-Arhente yezeMpilo yaseCanada (PHAC) ukuqinisekisa ukuba banesicwangciso esifanelekileyo sokuvalelwa. Abo bafika ngenqwelomoya baya kucelwa ukuba bahlale kwindawo emiselweyo yokuvalelwa ngelixa besalinde iziphumo zabo zovavanyo lokufika. Abayi kuvunyelwa ukuba baqhubele phambili bahambe de isicwangciso sabo sokuvalelwa samkelwe kwaye bafumene iziphumo zovavanyo lokufika ezingalunganga.
Abo bafikayo ngomhlaba banokuvunyelwa ukuba baqhubeke ngokuthe ngqo kwindawo yabo efanelekileyo. Ukuba abanaso isicwangciso esifanelekileyo-apho bengayi kunxulumana naye nabani na abangahambanga naye-okanye bengenazo izithuthi zabucala eziya kwindawo abavalelwe kuyo, baya kuyalelwa ukuba bahlale kwindawo emiselweyo yokuvalelwa.
Kuya kubakho uqwalaselo olwandisiweyo lwezicwangciso zokuvalelwa bodwa kubahambi abasuka kula mazwe kunye nokubekwa kweliso okungqongqo ukuqinisekisa ukuba abahambi bayayithobela imiqathango yokuvalelwa. Ngaphaya koko, abahambi, nokuba sithini na imeko yabo yokugonywa okanye babenembali yangaphambili yokuvavanywa ukuba banayo i-COVID-19, abangene eCanada besuka kula mazwe kwiintsuku ezili-14 ezidlulileyo bayakuqhagamshelwa kwaye bayalelwe ukuba bavavanywe kwaye babekwe bodwa ngelixa besalindile. iziphumo zezo mvavanyo. Akukho luxolelo lubonelelwe ngokukodwa kwezi mfuno zintsha.
Urhulumente waseCanada ucebisa abantu baseCanada ukuba bakuphephe ukuya kumazwe akulo mmandla kwaye baya kuqhubeka nokubeka esweni imeko ukwazisa ngezenzo zangoku okanye ezizayo.
ICanada iyaqhubeka nokugcina uvavanyo lwemolekyuli yangaphambi kokungena kwabo bagonyiweyo kunye nabakhenkethi bamazwe aphesheya abangagonywanga abafika bevela kulo naliphi na ilizwe ukunciphisa umngcipheko wokungeniswa kwe-COVID-19 kubandakanya ukwahluka. I-PHAC iye yabeka iliso kwidatha yetyala, ngovavanyo olunyanzelekileyo lokungena eCanada.
Urhulumente waseCanada uya kuqhubeka nokuvavanya imeko eqhubekayo kunye nokulungelelanisa imida yemida njengoko kufuneka. Ngelixa impembelelo yazo zonke izinto ezahlukeneyo iqhubeka nokujongwa eCanada, ugonyo, ngokudityaniswa nempilo yoluntu kunye nemilinganiselo yomntu ngamnye, lusebenza ukunciphisa ukusasazeka kwe-COVID-19 kunye nokwahluka kwayo.